Ukuphumla kwaye usebenze kwinqaba kwingingqi ye-Uckermark - I-Airbnb
Ukuphumla kwaye usebenze kwinqaba kwingingqi ye-Uckermark
Inqaba sinombuki zindwendwe onguCharles
Inqaba yaseWartin ihlala ibizwa ngokuba yeyona ndlu inkulu yothando kwi-Uckermark. Iyeyesiseko esingenzi nzuzo esithe sayihlaziya ngomoya wekholeji yase-Anglo-Saxon, kwaye ngoku amagumbi aqeshwayo ukuxhasa ukugcinwa kwe-castle ensemble. Iindwendwe ezinokwenzeka kufuneka zazi ukuba uninzi lwezinto zokwakha zivela kwi-1695, mhlawumbi kunokwenzeka ukuba isigcawu sifihle ekoneni.
Kumgangatho wokuqala wephiko lempuma kukho indawo evaliweyo esebenza njengendlu yangasese. Eli gumbi linamagumbi okulala amathathu, ngalinye linegumbi lalo lokuhlambela kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nomabonakude ongenazingcingo. Iindwendwe zikonwabela ukusetyenziswa okwabelwanayo kwethala leencwadi laseSaechtling kumgangatho osezantsi wephiko lempuma. Oku kunokusetyenziswa njengendawo yokuhlala emangalisayo ekwabelwana ngayo. Apha ungaphumla, uhlale kwaye mhlawumbi uthathe incwadi endala.
Ngaphaya koko, kukho amagumbi okulala amane kunye negumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo kumgangatho ongaphezulu wephiko lentshona elinokubhukishelwa kuphela indlu. Onke amagumbi anebhedi ephindwe kabini, enye inebhedi enye eyongezelelweyo.
Ngaphandle, indawo esempuma yegadi ikulindele njengendawo yabucala. Kukho izitulo zegadi kunye neetafile emthunzini wemithi emibini emihle ye-beech. Inqaba yahlulwe kwisitalato selali yi-castle pond kunye nodonga lwenqaba, olufaka isandla kuxolo kunye nokuphumla.
Sicela ukuba ukubhukishwa ngo-Airbnb kwenziwe kuphela kumaqela abantu abaziphekelayo. Ukuba ufuna ukonwabela ezinye iinkonzo ezongezelelweyo, nceda ubuze ngewebhusayithi yethu.
Ngexabiso elisisiseko le-€ 210.00 ungasebenzisa amagumbi amabini aphindwe kabini kwi-flatment yephiko lasempumalanga (abantu abayi-6).
I-€ 60.00 eyongezelelweyo iya kuhlawuliswa kwigumbi ngalinye elongezelelweyo, kungakhathaliseki ukuba isetyenziswe ngabanye okanye kabini. Ukuba ufuna ukuba negumbi elinye, kufuneka ubhukishe elinye igumbi kwa-Airbnb elinabantu aba-2.
Usapho lwethu oluncinci luhlala kwi-castle ensemble kwaye siyavuya ukuphendula nayiphi na imibuzo onokuthi unayo. Mna, Charles, ndingowaseNew Zealand kwaye ubukhulu becala ndisebenza eWartini. Umfazi wam uNui uvela eBangkok kwaye ngothando uyayihoya yonke ipaki kunye nendawo yegadi ejikeleze inqaba. Intombi yethu eneminyaka esixhenxe ubudala uBini yazalelwa eNgilani yaye isendleleni eya esikolweni ingaphaya komda isiya ePasewalk (eMecklenburg-Western Pomerania). Iqela lethu ligqitywa ngamalungu eqela aququzelela indawo yokuhlala kunye nam kwaye ajonge iindwendwe zethu.
Usapho lwethu oluncinci luhlala kwi-castle ensemble kwaye siyavuya ukuphendula nayiphi na imibuzo onokuthi unayo. Mna, Charles, ndingowaseNew Zealand kwaye ubukhulu becala ndiseben…